I-Federation Council isilungise inqubo yokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane nama-agrochemicals - umagazini i- "Potato System"
Emhlanganweni wayo wama-487, uMkhandlu Wenhlangano wamukele izichibiyelo kwi-Federal Law "On the Safe Handling of Pesticides and Agrochemicals" kanye noMthetho "On State Regulation of Ensurance the Fertility of Agricultural Lands" maqondana nokwenza ngcono ukulawulwa okungokomthetho kobudlelwano emkhakheni wokuvikela amazwe wezolimo.
Lo mbhalo wethulwe ngomunye wababhali balo mthethosivivinywa - Iphini likaSihlalo weKomidi Lomkhandlu Wenhlangano Yezolimo Nezinqubomgomo Zokudla kanye Nokulawulwa Kwezemvelo, omele uMkhandlu Wenhlangano ovela esigungwini sezomthetho samandla ombuso we-Altai Territory uSergey Belousov.
Njengoba i-senator yaphawula, izinguquko zihlobene nokusetshenziswa kokubulala izinambuzane kanye nama-agrochemicals, kucatshangelwa isimo sokuvundiswa komhlaba wezolimo ngesisekelo sezinhlolovo. Futhi, izinguquko ezihlelekile zenziwa kuMthetho Wombuso "Emthethweni Wezwe Wokuqinisekisa Ukuzala Kwamazwe Ezolimo", imiqondo yawo eyisisekelo, izinhloso, isihloko sendaba, amalungelo nezibopho zabasebenzisi bomhlaba, kanye nokubhaliswa kwesimo kwezinkomba zesimo sokuzala komhlaba wezolimo kuchaziwe.
Isibopho sokwenza inhlolovo yenhlabathi nokwakha uhlelo lokuthatha izinyathelo zokwenziwa kabusha kwenhlabathi yezolimo sinikezwe izikhungo zesabelomali zombuso ezingaphansi koMnyango Wezolimo waseRussia. Imisebenzi ephoqelekile izokwenziwa ngaphandle kokushaja abasebenzisi bomhlaba.
Inqubo yokwakhiwa kwezinhlelo zokwenza ucwaningo ngomhlaba wokulima, imvamisa yocwaningo olunjalo, kanye nohlelo lwezinyathelo zokwenziwa kabusha kokuzala komhlaba olusungulwe nguHulumeni waseRussia Federation, kusho uSenator.
Umlobi walesi sikhalazo waphawula ukuthi iRussia inamaphesenti ama-9 omhlaba olimekayo emhlabeni, ingelinye lamazwe amane anezindawo ezinkulu zokugcina umhlaba ezakhiwe. Ngasikhathi sinye, imiphumela yokuqashelwa kombuso komhlaba wezolimo okwenziwe nguMnyango Wezolimo waseRussia ikhombisa ukuthi e-Russian Federation eminyakeni yamuva nje, izinqubo zokucekelwa phansi komhlaba (ukuthuthukiswa kokuguguleka kwamanzi kanye nokugqwala komoya, ukusatshalaliswa komhlaba, ukukhiswa kosawoti, ukubikwa kwamanzi kanye nezinye izehlakalo ezingezinhle) kuye kwashesha.
Ngokusho kukaSergei Belousov, izinga lokuzala lisesinye sezinkomba ezibaluleke kakhulu zokusebenza kahle kwezomnotho kulo mkhakha.
Ubuye wakhumbula ukuthi uhlelo olusha lwe-Draft State lokuzibandakanya okusebenzayo komhlaba wezolimo ekuguqukeni nasekuthuthukisweni kwesakhiwo esijabulisayo seRussian Federation sonyaka we-2021-2030 kuhlinzekela ukubamba iqhaza ukuphela konyaka wezolimo onendawo okungenani yamahektha ayi-2030 wezigidi ukusatshalaliswa, kanye nokwanda kwenani lamahektha Indawo etholwe kabusha umhlaba ngamahektha ayizigidi eziyi-12.
Umthetho omusha, u-Belousov uqinisekile, uzoba usizo lwangempela ekwenziweni koHlelo loMbuso olulungiselelwe, oluyisisekelo sokwakheka kwenqubomgomo yokusetshenziswa komhlaba okunengqondo kanye nesinyathelo esibucayi ekuthuthukiseni izindawo zasemakhaya, ukwenza ngcono izinga lokuhlala nokuqashwa kwezakhamizi zasemaphandleni.
Tags: UMnyango Wezolimo waseRussiaizibulala-zinambuzaneukusetshenziswa komhlaba okunengqondo